အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ မြူခိုးဆီးနှင်းများ ပိတ်ဆို့ကာ လေထုညစ်ညမ်းမှုများ ရှိနေသော ရာသီ? - Yangon Media Group
ယခုအချိန်ကာလများသည် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများတွင် မြူထူထပ်စွာကျရောက် သော အချိန်အခါဖြစ်နေသောကြောင့် လူအများအပြားတို့မှာ လေထုသိပ်သည်းမှုကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဘယများ ဖြစ်ပွားကာ သက်သာပျောက်ကင်းစေရန်နှင့် တစ်ပါးသူတို့အား မကူးစက်နိုင်ရန် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ပြသရန် မနှောင့်နှေးသင့်ဟု မလေးရှားလေ့လာချက်တစ်ရပ်က အကြံ ပြုထားသည်။
သုတေသနပြုထားချက်အရ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် မှစတင်ကာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် နှစ်စဉ် ရာသီဥတုအရရော၊ လူ့ပယောဂများ ကြောင့်ရော မြူနှင်းများ ကျဆင်းခြင်း၊ မီးခိုး ပြာများ ပိတ်ဆို့ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်း သုတေသနပြုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့ခြင်း၊ တော မီးလောင်ခြင်းများသည် သဘာဝကြောင့်ဖြစ် ပြီး စက်ရုံများမှ မီးခိုးများထုတ်၍ လေထုတွင်း ပိတ်ဆို့နေရခြင်းသည် လူ့ပယောဂကြောင့် ဖြစ်ပွားရသော လေထုမသန့်ရှင်းစေမှုဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် လယ်ယာပေါင်းမြက်များ အား ခုတ်ထွင်မီးရှို့ခြင်းကြောင့်လည်း လေထု အတွင်း မြူခိုးများ ပိတ်ဆို့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကွာလာလမ်ပူအခြေစိုက် မလေးရှားအမျိုးသား တက္ကသိုလ် ကျန်းမာရေးစင်တာက ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ သုတေသနပြုလုပ်ရာမှ တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ရက်သတ္တပတ် ၁၆ ပတ်သည် မြူနှင်းများ၊ မီးခိုးမြူတိမ်များကြောင့် လူအများတွင် အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဘယများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။ ယင်းတို့သည် လေတိုက်ရာလမ်းကြောင်း မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် လေထုစိုထိုင်းမှုများကြောင့် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ မြူထူထပ်ရာ ၁ဝ ကီလိုမီတာထက် အဝေးသို့ ပိုမမြင်ရ တတ်သော သုတေသနတွေ့ရှိချက်ကို ယင်းကာလအတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၁၆ ခု တွေ့ရှိ ခဲ့ရသည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်သမားများနှင့် နာတာရှည်အဆုတ်နှင့် နှလုံးရောဂါရောဂါရှင်များသည် ယင်းကာလများ၌ တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် ဆေးရုံပြကုသသင့်သည်ဟု သုတေသီ ဒေါက်တာဒီနစ်ဇာဘလာဂက်ဗ်က အကြံပြုထားသည်။
ကိုယ်ခံအားစနစ်က အင်အားပြန်လည် ပြည့်ဝရေးအတွက် အရေးပါ
Super Junior အဖွဲ့၏ ဆိုးလ်ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် စီဝမ် ပါဝင်မည်
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၌ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတ မှာကြ??